यस्ता युवतीलाई कहिल्यै पनि गर्लफ्रेण्ड बनाउनुस् नत्र जीवनभर हुनेछ तनाव, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यस्ता युवतीलाई कहिल्यै पनि गर्लफ्रेण्ड बनाउनुस् नत्र जीवनभर हुनेछ तनाव
एजेन्सी। आजकल धेरैजसो युवा आफ्नो मनको कुरा शेयर गर्नकालागि यस्तो साथीको खोजिमा हुन्छन् जसले आफूलाई बुझ्न सकोस्। यस्तो अवस्थामा युवाले आफ्नी गर्लफ्रेण्डलाई सबैभन्दा नजिकको साथी मान्छन्। तर, कयौं पटक हतार हतारमा युवाहरु यस्ता युवतीसँग घुलमिल हुन्छन् जसका कारण उनीहरुले दुख पाउँछन्।
युवाहरुलाई सभ्य र साधारण युवती मन पराउँछन्। उनीहरुलाई त्यस्ता युवती समझदार लाग्छ। तर कहिले काँही कम बोल्ने र चाँडै भावुक हुने युवतीसँग दोस्ती गर्नुपनि गलत हुनसक्छ। किनभने यस्ता युवती कुरा गर्न आफ्ना साथीमाथि निर्भर हुन्छन्। यस्तोमा युवलाई मानसिक सर्पोट मिल्दैन। भावुक युवतीसँग सुरुमा युवाको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। तर समय बित्दै जाँदा गर्लफ्रेण्डको यही बानीले दुख दिनसक्छ। यस्तो अवस्थामा गर्लफ्रेण्डसँग तपाइँले खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्न। किनभने त्यस्तो कुराले तपाइँको गर्लफ्रेण्डलाई नराम्रो लाग्न सक्छ।
त्यसो त शंका गर्ने युवतीको स्वभाव हुन्छ। र, केही युवती यस्ता पनि हुन्छन् जो जे कुरामा पनि शंका गर्छन्। यस्ता युवतीसँग सम्बन्ध राख्दा उनीहरुमाथि भरोसा गर्न सकिँदैन। जसका कारण भविष्यमा ठूलो समस्या पनि आउन सक्छ।
शंकालु स्वभावकी गर्लफ्रेण्डसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दा युवाको प्रगति हुन सक्दैन। किनभने यस्ता युवती सँधैं आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डलाई आफ्नो अगाडि हेर्न चाहन्छन्। उनीहरु आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डले सधैं समय दिइराखोस भन्ने चाहन्छन्। यस्तोमा युवा धेरै बाहिर भयो भने सम्बन्धमा तनाव आउन सक्छ।
केही युवतीको बानी अरुलाई तल पार्ने खालको हुन्छ। यस्ता युवती आफ्नो सम्बन्धमा पनि यो बानीलाई छोड्दैनन्। उनीहरु आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डले सधैं आफूलाई साथ दियोस भन्ने चाहन्छन्। र, आफूले भनेका सबै कुरामा मानोस भन्ने चाहन्छन्। तर कयौं पटक युवतीले भनेको कुरा गलत भएपनि ब्वाइफ्रेण्डले सोको विरोध गर्न सक्दैनन्। किनभने त्यस्तो गर्दा सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ।
अर्कालाई तल पर्ने स्वभावका युवती आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्छन्। यस्तोका ब्वाइफ्रेण्डसँग जोडिएका कतिपय विषय जस्तै परिवारको ख्याल गर्ने, ब्वाइफ्रेण्डको भावनालाई बुझ्नेलगायतका विषयमा ध्यान दिँदैनन्। यस्ता युवतीसँग सम्बन्ध बनाउने युवाले मानसिक रुपमा समस्या झेल्नुपर्छ।